Saturday October 17, 2020 - 07:10:02 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa sheegaya in halyeey muslim ah uu fuliyay weerar uu ku dilay mid kamida gaalada ku dhiiratay in ay aflagaadeeyaan Nabiga SCW.
Saraakiisha booliska dowladda Faransiiska ayaa xaqiijiyay in weerar loo adeegsaday toorrreey uu sababay dhimashada nin 47 sana jir ah oo isbuucii lasoo dhaafay faafiyay sawirro gacmeedyo uu ku aflagaadanayo nabiga maqaamka sare leh ee Muxamed SCW.
Wiil dhalinyaro muslim 20 sana jir ah oo ku qeylinayay kalimadda "Allaahu Akbar" ayaa qoorta ka jaray gaalka Faransiiska ah kaas oo isbuucii lasoo dhaafay arday uu umacallin u ahaa usoo bandhigay sawirro gacmeeyadii uu horay ufaafiyay wargeyska Charlie Hebdo.
Afhayeen u hadlay booliska Faransiiska ayaa sheegay in ay hareeraha magaalada Paris ku dileen wiilkii dhalinyarada muslimka ahaa ee weerarka fuliyay.
Madaxweynaha Faransiiska ee islaam naceybka ku caanbaxay oo ka hadlay weerarka ayaa argagax ka muujiyay qaabka loo dilay ninka gaalka ah ee aflagaadeeyay Nabiga SCW.
Macron ayaa ku hadaaqay in gaalka ladilay uu dhibane u ahaa wax uu ugu yeeray xuriyadda hadalka, hoggaamiyaha Faransiiska ayaa aflagaadeynta Nabiga ku sifeeya xuriyatul qowl isagoo marwalba ku hadaaqa hadallo uu ku ijaafanayso muslimiinta.
Weerarkan uu fuliyay halyayga muslimka ah ayaa farriin u ah gaal walba oo ku dhiirada wax ka sheegidda cirdiga Nabigeena maqaaka sare leh ee Muxamed SCW, malaayiin muslimiin ah ayaa udiyaarsan in ay edbiyaan qof walba oo afka ku taaga Khaatimul ambiyaa oo wax ka sheegiddiisu tahay khad cas oo aan laga gudbi karin.